Android P ၏ပထမဆုံးဗားရှင်းသည်ဒီမှာပါ။ ၎င်း၏အသေးစိတ်ကိုသိပါ Androidsis ပါ
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်သတင်းများနှင့်ပေါက်ကြားမှုများ၊ Android P သည်ငါတို့ထဲ၌ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဂူးဂဲလ်ရဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ် တရားဝင် developer preview ကိုဗားရှင်းရောက်ရှိလာသည်။ ဒီဗားရှင်းရှိပြီးသား ဖြစ်၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသူကျွန်တော်တို့ကိုထွက်ခွာသောအဓိကသတင်းကိုသိနိုင်သည်။
Android P ကလုပ်ဆောင်ပေးမယ့်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကိုသိပြီးတဲ့နောက်။ developer များအတွက်ဒီဗားရှင်းကကျွန်တော်တို့ကို operating system ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရန်ကူညီသည်။ Google I / O 2018 တွင်အသေးစိတ်တင်ပြမည့်မူကွဲတစ်ခု။
Android P developer များအတွက်ဒီ version အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် developer များအတွက်ဝဘ် တပ်ဆင်ခြင်းကို manually ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ယခုပဏာမထုတ်ဝေမှုကို Android Beta ပရိုဂရမ်တွင်မရရှိနိုင်ပါ။ Google I / O 2018 နှင့်ဒုတိယဗားရှင်းမရောက်ရှိမှီတိုင်အောင်၎င်းသည်မရရှိနိုင်ကြောင်းအရာအားလုံးကဖော်ပြသည်.
ဂူဂဲလ်ကိုယ်တိုင်ကမူ Android P သည်စနစ်၏အခြေခံအကျဆုံးရှုထောင့်များကိုတိုးတက်စေရန်ရှာသောဗားရှင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအကြောင်းကြားစာများစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
ဒီမူကွဲကကျွန်တော်တို့ကိုယူလာတဲ့သတင်းကိုငါတို့သိပြီးသားပါ။ Android P မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
1 Android P မှာဘာအသစ်တွေလဲ
1.1 Android P ရှိအခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ
Android P မှာဘာအသစ်တွေလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် WiFi RTT ကို အသုံးပြု၍ မိုးလုံလေလုံတည်နေရာကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ နေရာအတိအကျပေးခြင်းသည်အိမ်တွင်း၌ ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဒီ operating system ဗားရှင်းအသစ်ဟာတိုးတက်လာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အရာ။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသည် IEEE 802.11 mc WiFi protocol support ကိုWiFi Round-Trip Time (RTT) ဟုလည်းလူသိများသည်။ ဤနည်းပညာနှင့် hardware နှင့်ကိုက်ညီသောဖုန်းများသည်အကွာအဝေးများကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက် RTT APIs များကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤ APIs များကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များကိုအသုံးချနိုင်သည်။ ဥပမာအိမ်တွင်းအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်အိမ်တွင်းအညွှန်းသို့မဟုတ်အသံထိန်းချုပ်မှု။ ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုမျှော်လင့်ထားတယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Google Assistant အတွက်ပိုမိုကြီးမားသောအခန်းကဏ္ to မှပါဝင်သည်။
ဒုတိယအချက်မှာ Android P သည် Notch အတွက်ဇာတိအထောက်အပံ့လည်းပေးသည်။ developer များသည်အရွယ်အစားသုံးမျိုးအထိအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့ဒီ function ကပြသခြင်းကစျေးကွက်ထဲမှာဆက်ရှိနေရန်ပြသခဲ့သည်။
အသိပေးချက်များသည်လည်းနောက်တစ်ဖန်ဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ Google သည် operating system ဗားရှင်းအသစ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အမြင်အာရုံတိုးတက်စေရန်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ status bar သို့မဟုတ် notification bar မှသတင်းများကိုဝေမျှရန်ပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ အဓိကအားဖြင့်ကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သောအကြောင်းအရာ၏အစမ်းကြည့်ခြင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗွီဒီယိုတွေပို့လိုက်ရင်သူတို့ဆီကိုကြိုတင်ကြည့်လို့ရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖြေများအတွက်ရရှိနိုင်သည့်အကြံပြုချက်များလည်းရရှိပါမည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ Gmail application ထဲမှာ Google မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ။ ဒီ function ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပုံရတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကယေဘုယျအားဖြင့် Android မှာသူ့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုတိုးချဲ့ချင်တယ်။ ဒါကြောင့်သတိပေးချက်တွေဘယ်လိုတိုးတက်လာသလဲဆိုတာကိုပြန်သွားကြည့်တယ်။ ထို့အပြင် Notification bar တွင်ဒီဇိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်ထားသည်။
Android P ရှိအခြားစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ
ဤရွေ့ကား operating system ၏ဗားရှင်းကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုအဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်အခြားသူများစွာရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုလူသိများခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီသောအရေးပါမှုမရှိပါ။ ဤအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသင့်ကိုအောက်တွင်ချန်ထားခဲ့သည်:
မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုများအတွက် API အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်
မိုက်ကရိုဖုန်း၊ ကင်မရာနှင့်အာရုံခံကိရိယာအားလုံးကိုအသုံးပြုခွင့်သည်နောက်ခံရှိအပလီကေးရှင်းများကိုသာကန့်သတ်ထားမည်။ ပြီးသားရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးသောအင်္ဂါရပ်တစ်ခု။
ပိုမိုသောရုပ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကုဒ်နံပါတ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်း (HDR VP9 သို့မဟုတ် HEIF)
စက်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ယက် API အသစ်
Dual Camera ရှိသည့်ဖုန်းများရှိ Secondary Sensor မှသတင်းအချက်အလက်တောင်းရန် third-party application များအတွက် API
အသစ်အဆန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုငါတို့တွေ့နိုင်တယ်၊ အချို့သောသူများသည်ဖုန်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်အရာများရှိသော်လည်းအချို့မှာမူ privacy ကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါရှင်းပါတယ် Android P သည်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်တိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်များကကျွန်ုပ်တို့အား Android P. မှမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများကိုမျှတစွာခန့်မှန်းထားပါသည်။ ၎င်းသည် operating system ဗားရှင်းအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားစေမည့်အရာအားလုံးအတွက်အနည်းငယ်သောအချက်များဖြစ်သည်။ Android Oreo ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကုမ္ပဏီကအခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဗားရှင်းအသစ်မှာမျှော်လင့်ချက်များစွာရှိနေပါတယ်။
မေလမှာ Google I / O 2018 ကိုကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာဒီလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုပိုပြီးတိတိကျကျသိရလိမ့်မယ်။ အချို့သောအပိုဆောင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုပင် featured နိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Android P သည်ကျွန်ုပ်တို့အားထားခဲ့သည့်အရာအားလုံးကိုအလွန်ဂရုပြုလိမ့်မည်။ သင် operating system ၏ဤအသစ်သောအင်္ဂါရပ်ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android P သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ - အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိရှိထားပါ
ဘယ်လောက်ကောင်းလဲ ... ငါ့ Huawei p10 selfie ရောက်လာမှာလား ???
Julian Ns သို့ပြန်သွားပါ